I-High Valley Cottage
Jabulela uxolo kunye nokuzola, phantsi kwendlela ende ejikelezayo, kwintlambo ye-Big Lost River, ejikelezwe zezona ntaba ziphakamileyo ze-Idaho. Ime kufutshane neMackay, (malunga neekhilomitha ezi-6) kwaye ibamba ii-ATV ezininzi kunye neendlela zokuhamba intaba. I-trailhead ye-Mt Borah, eyona ntaba iphakamileyo ye-Idaho, i-20 yeekhilomitha phezulu kwintlambo. Idama, kunye nemilambo zezona ndawo zokuloba ezifanelekileyo.
Le ndlu yangasese yayinziwe yafana neeshedi zeegusha kwidlelo elilandelayo. Ingaphakathi lizaliswe ngamaplanga omsedare nenkcenkce.
Le ndlwana ikufuphi neendawo ezininzi ezibukekayo, njengeCraters of the Moon, imizuzu engama-45. I-Sun Valley, ngepanoramic Trail Creek Road, yiyure enye. Umnyango wasentshona weYellowstone National Park, iiyure ezi-3. Kwaye okuninzi ...
Sihlala kwipropathi, kwaye siyathanda ukudibana neendwendwe zethu, ukuba ziyasebenza. Nceda uthumele umyalezo, ufowune okanye uze endlwini ukuba unombuzo.